महिलामा यी ६ कारणले हुने गर्दछ बाझोपन, यस्ता छन् सुरुवाती लक्षणहरु !
काठमाडौँ । विवाह पश्चात नयाँ दम्पतिमा सन्तान जन्माउने धेरै इच्छा हुन्छ । तर, उनीहरुले सन्तान जन्माउनको लागि धेरै प्रयास गरेपनि उनीहरु आमाबुबा बन्न सक्दैन । जसलाई बाँझोपन भएको भनिन्छ । जसको कारण बच्चा जन्माउनको पुर्ण रुपमा क्षमता घटाउँछ । सामान्यतया विवाह गरेको ६ महिनासम्म पनि महिला गर्भवती नभएमा बाँझोपनको समस्या पनि हुन सक्दछ । बाँझोपनको समस्या महिला र पुरुष दुवैलाई हुन सक्छ ।
१.बाँझोपनको प्रमुख कारण ढिलो विवाह
डा. निकेता टे«वन भन्छिन्, ‘बाझोपन धेरै कारणले हुन्छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो कारण ढिला विवाह गर्नु रहेको छ । उनका अनुसार २० देखि ३५ वर्ष उमेरका महिलाहरु सन्तान जन्माउनको लागि योग्य हुन्छन् । यदि यो उमेर पछि विवाह भएको छ भने गर्भावस्थामा बढि समस्या हुने गर्दछ ।
केहि कारणले ढिलो उमेरमा विवाह पश्चात पनि गर्भ रहयो भने महिला तथा बच्चामा धेरै समस्या देखिने गर्दछ । जसको कारण शिशुको तौल कम हुन, आनुवंशिक रोग देखा पर्ने, महिलालाई बच्चा जन्माउनु भन्दा पहिले देखि नै कठिनाई हुने गर्दछ ।
२. ३५ उमेर नाघेपछि महिलामा डिम्बाशयको कमी
डाक्टरहरुले भन्दै आएका छन् कि महिलाहरुको उमेर बढ्दै जाँदा गर्भवती महिलामा डिम्बाशयको कमि हुँदै जान्छ । महिलामा ३५ वर्षपछि डिम्बाशय कम हुनु साधारण विषय हो ।
३.ट्युब ब्लकका कारण बाँझोपन
डाक्टरका अनुसार धेरै पटक संक्रमणको कारणले फेलोपियन ट्युब रोक्नु इन्फर्टिलिटीको ठुलो कारण हो । फेलोपियन ट्युब पनि पल्बिक संक्रमण र टिबीको कारण हुने गर्दछ ।
४.अस्वस्थ्य खानपानको कारण
आजकालका महिलाहरुमा खानपानको कारण पनि बाझोपन बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा महिलाहरुमा खानपानको विषयको कारण धेरै बाझोपन बढ्दै गएको छ । यसको बाहेक इन्डोमेट्रोसियोसिसको समस्या पनि देखिन्छ ।
डा। निकिता भन्छिन्, ‘बाझोपनको कारण अव्यवस्थित जिवन शैली पनि हो । रातीको समयमा नसुत्नाले, धुमपान, मद्यपान सेवन गर्नाले, मधुमेहको कारण, तनाव लिने जस्ता कारण बाझोपनको समस्या देखिने गर्दछ ।
बिना कुनै केमिकल बिना घरमै बसेर यसरी गर्नुहोस् आफ्नो कपाल स्ट्रेट…
पेटको बोसो घटाउने हो ? उसोभए दैनिक खानुहोस् यी ५ कुरा
यसबाहेक पीसीओडी पनि एक रोग हो, जुन महिलाहरुमा धेरै उत्पन्न हुने गर्दछ । ६० देखि ७० प्रतिशत महिलामा व्यायाम गर्न कुनै कार्य छैन । व्यायमको कमिको कारण पनि महिलाहरुको हर्मोनमा कमि आउने गर्दछ ।
६.थाइराईड पनि बन्छ बाँझोपनको बाधक
यसबाहेक इन्डोक्राइन डिसअर्डरको कारण थाइराईडको समस्या आउने गर्दछ । थाइराईडको नियन्त्रण नगरेसम्म बच्चा जन्मिन कठिन हुने गर्दछ । डाक्टरहरुले भन्ने गरेका छन् बाझोपनको अधिंकाश कारणको उपचार हुने गर्दछ । बाझोपनको नियन्त्रणको लागि दाम्पतीहरु समयमा नै चिकित्सक कहाँ गएर सल्लाह सुझाव लिन आवश्यक छ ।
यस्ता छन् देखिने लक्षणहरु
यदि हाम्रो महिनावारी नियमित रुपमा हुन्छ भने हामी गर्भवती हुन सक्छौँ तर अनियमित महिनावारी,महिनावारीको समयमा दुख्नु र महिनावारी नभएका कारण महिलामा बाझोपनको समस्या हुने देखिन्छ ।
गर्भाशयबाट रक्तस्राव: केही महिलाहरूमा महिनावारीको समयमा बाहेक पनि गर्भाशयबाट हल्का रगत बग्दछ, जसलाई फाइब्रॉएड भनिन्छ। यो ट्यूमरको एक प्रकार हो जब ट्यूमरको मांसपेशिहरुमा टिशूको अधिक छ भने हुन्छ।
यौन सम्बन्ध राख्दा दुखाई: शारीरिक सम्बन्ध बनाउँदा कुनै पीडा हुनुहुदैन। यदि तपाईंलाई यस्तो भयो भने, यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्, तर तुरुन्तै डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। किनभने यसको कारण तपाई गर्भवती बन्न सक्नुहुन्न ।
वजन बढ्नु : केही महिलाहरूको विवाह पछि अचानक तौल बढ्ने गर्दछ । यदि व्यायाम र खाना र पेय परिवर्तन पछि पनि कसैको तौल कम हुँदैन भने, यो महिला बांझपन को कारण हुन सक्छ।
अनुहारको कपाल: शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढेको कारण अनुहारको कपाल पनि बढ्न सक्छ। यदि तपाईंको छाला, माथिल्लो ओठ, छाती, पेटमा कपाल बढ्न थाल्छ भने यो संभोग हार्मोनमा टेस्टोस्टेरोनमा गडबडीको लक्षण हो।